Robert Lewandowski Oo Go'an Ka Gaaray Heshiiska Cusub Ee Bayern Munich'
HomeWararka CiyaarahaRobert Lewandowski oo go’an ka gaaray heshiiska cusub ee Bayern Munich’
Robert Lewandowski oo go’an ka gaaray heshiiska cusub ee Bayern Munich’
May 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Robert Lewandowski ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuusan qandaraaska u kordhin doonin Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Halyeeyga weerarka ka ciyaara ayaa ku riyaaqay olole kale oo heer sare ah isagoo ka qeyb qaatay 49 gool tartamada oo dhan, wuxuuna ka caawiyay Bayern inay sii wataan awoodeeda Bundesliga.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Poland uu qandaraaskiisu dhacayo 2023, fursada ayaa u muuqata inay halkaas ka qaadan karto tartan cusub iyadoo Barcelona la sheegay inay la dhacsan tahay weerarka .
Inkastoo hore loo sheegay in Bayern aysan dooneyn inay lacag kaash ah ku helaan 33-sano jirkaan xagaagan, Goal ayaa sheegaysa in Lewandowski uusan dooneynin inuu heshiis cusub ku saxiixo Allianz Arena.
Warbixintu waxa ay soo jeedinaysaa in ciyaaryahanka mudada dheer ku soo jiray kooxda uusan ku faraxsanayn madaxda kooxda inay ku guuldareysteen inay horumar ka sameeyaan miiska wada xaajoodka ka hor toddobaadyada xiritaanka ololaha.